चिटिक्क मिलेको स्टिलको दराजभित्र गीता, रामायण, बाइबल, कुरानका धार्मिक पुस्तकहरु सजाएर राखिएको थियो । कोठाको सजावट पुरै स्टिलको फर्निचरहरुले सजाइएको थियो । सिर्फ कोठाको भित्तामा टाँगिएको फोटो फ्रेम मात्र काठको थियो । ऊ वरिपरि आँखा घुमाउँछ । आफ्नो कोठाको बनावट र आफू बसेको घरको तस्बीर हेरेर दंग पर्छ । समयभन्दा पनि आफू छिटो हिडे जस्तो लाग्छ उसलाई । समयलाई नै पछारेर यछि छोटो समयमा ठूलो प्रगति गरे जस्तो लाग्छ उसलाई ।
ओठमा मन्द मन्द मुस्कान छर्दै भित्तामा झुण्डिएको काठको फ्रेममा सेतै कपाल फुलेका बूढाबूढीको तस्बिर हेर्छ । एकछिन फेरि टोलानउ थाल्छ । पछाडिबाट कसैले मिस्टर नयान भन्ने आवाज सुनेर ऊ पछाडितिर फर्कन्छ ।
सर्लक्क परेको जिउडाल ठूलाठूला आँखा अनि सदैझै हसिलो अनुहार लिएर उसकी श्रीमती नेटी हातमा कफी लिएर उभिरहेको थियो । जति सिकाए पनि यस पटक पनि उसकी श्रीमतीले नाम उच्चारण गलत गलत ढंगले गरेकी थिई । ऊ रिसले मुरमुरिन्दै निटीको हातबाट कफी लिन्छ तर उसको रिसले नेटीलाई केही फरक पर्दैन । आफ्नो अनुहारमा कुनै भाव परिवर्तन नगरी काठादेखि बाहिर निस्कन्छे । कफी लिएर ऊ कुर्सीमा थचक्क बस्छ । फेरि त्यही भित्ताको तस्बीर हेर्दै अतितका पलहरुमा डुबुल्की खेल्न पुग्छ ।
आजभन्दा ५० वर्ष अगाडि ऊ आफ्नो देश नेपाल छाडेर आमाबुबा, बाजेबोजुसँग जापान छिरेका थिए । नेपालमा उनीहरुलाई नपुग्ने अभाव केही थिएन तर आफ्नो बुबाको कामको शिलशिलामा उनीहरु जापान आएका थिए । पछि छोराको भविष्य यतै राम्रो हुन्छ भनेर सबैजना जापानमा नै बसोबास गरे । सानोमा नै जापानीज स्कुलमा पढेर होला जापानीज भाषा लेख्न, पढ्न कुनै गाह्रो भएन । जहिल्यै पनि उसको नाममा शिक्षकहरु साथीहरु त्यसै अलमलिन्थे । उसको नाम त्यस्तो थियो । ‘बैकुण्ठ नारायण’ बाजेबोजुले हिन्दूधर्म प्रति बेस्सरी विश्वास गर्ने भएर उसको नाम राखे बैकुण्ठ नारायण पहिले त उसलाई आफ्नो नाम पटक्क मन परेको थिएन । तर सबैले आफ्नो नाम उच्चारण गर्न नसक्दा उसलाई मज्जा लाग्दथ्यो । त्यसैले सबैले नाम परिवर्तन गर्नु सल्लाह दिए पनि उसले नाम परिवर्तन गरेन । एक प्रकारले भन्ने हो भने । स्कुल र घरमा ऊ छुट्टै ग्रहबाट आएको प्राणी जस्तै थियो । न उसलाई नेपाली परम्पराले छोएका थियो । न त जापनीज परिवेशले नै । उसको आफ्नै दुनिया थियो ।
घरमा आमा बाइबल पढ्ने, हजुरआमाबा रामायण गीता पाठ गर्ने । यस्तो धार्मिक वातावरणमा पनि ऊ आफूलाई ढाल्न सकिरहेको थिएन । जब ऊ १४ वर्ष पुग्यो उसको मुस्लिम केटीसँग प्रेम बस्यो । उनीबाट उसले ‘कुरान’ उपहार पायो । किताबहरु राखेर पढ्ने उसलाई खुब रहर जाग्यो । त्यसैले रामायण गीता बाइबल र कुरान लिएर खुब अध्ययन गरे तर पनि उसलाई कुनै भगवानप्रति मोह जागेन । ऊ त कुनै नौलो कुराको खोजीमा थियो । उसको केटीको मुस्लिमतिर आउने आग्रह र
रुवाइले उसलाई नरमाइलो अनि दिक्क लाग्यो र छोडी पनि दिए ।
केटीको माया मोहमा परेमा प्रगति हुनेवाला छैन भनर कम्प्युटरमा ब्यस्त हुनथाल्यो । उसको साथी भन्नु त्यही कम्प्युटर नै थियो । खात्राक खुत्रुक सामानहरु लिएर केके बनाइरहन्थ्यो । झन स्कुलदेखि वैज्ञानिक प्रयोगशाला घुमेर आएदेखि उसमा निक्कै परिवर्तन देखिएको थियो । साच्चै ठूलो परिश्रमले आज उसले छुट्टै संसार निर्माण गरेको छ । आफ्नै संसार–बिल्कुलै आफ्नै । यतिकैमा ढोका खोलेको आवाज आउँछ । फेरि ऊ झस्किदैँ आफ्नो अतीतदेखि छताछुल्ल भएर बाहिर आउँछ । उसको छोरा सिठी र मिटी आएर ग्ल्याम्म अंगालो हाल्छ । उनीहरुको साह्रो हातले एकछिन घाँटी अट्ठ्याए झैँ लाग्छ । उसलाई अनि चिसोचिसो गालाले ठिरायो झैं लाग्छ उसलाई तर पनि यति धेरै दुःख गरी बनाएको छोराछोरीलाई उसले धकेल्न सकेन । बरु मुसुक्क हाँस्दै दुबैलाई आआफ्नो वरिपरि राखेर एकोहोरो हेरिरहन्छ । सिटी र मिटी फेरि खेल्नतिर व्यस्त हुन्छ ।
बैकुण्ठ जरुक्क उठेर बरण्डातिर लाग्छ । उसको बरण्डा वरिपरि फूलैफूलले ढाकेको थियो । ती फूलहरुमाथि रंगीचंगी पुतली, मौरी, भमरा सबै उडिरहेका थिए । मानौ त्यस फूलबारीमा ठूलो मेला लागेको थियो । फेरि ऊ बरण्डादेखि तलतिर आफ्नो बगैंचातिर आँखा डुलाउँछ । उसको बगैंचाभरि हरियाली रुखहरु, फलफूलहरु लटरम्म फलेको थियो । त्यो देखेर ऊ लामो श्वास फेर्छ अनि आफ्नो कोठातिर फर्किन खोज्छ । त्यतिकैमा उसको खुट्टामा केही ठोकिए झै लाग्छ । ऊ निहुरिएर हेर्छ । त्यहाँ एउटा पुतली लडिरहेको थियो । उसले त्यसलाई मायाले टिप्यो अनि ओल्टाई पल्टाई हे्यो ।
तार चुडिएकोले पुतली काम नलाग्ने भइसकेको थियो । त्यसैले त्यसलाई फोहोर फाल्ने ढ्वाङमा हाल्छ र त्यस्तै अर्को पुतली ल्याई फूलमाथि राख्यो । त्यतिकैमा उले चराको आवाज सुन्छ, त्यतैतिर हेर्छ । उसकी छिमेकी सुकीमोरीले पालेको एक सुन्दर सुगा बतिँदै उसको बगैँचामा फलेको लटरम्म फल खानतिर लाग्छ । सुगाले जति प्रयास गर्दा पनि त्यस फललाई खान नसकेको देख्दा बैकुण्ठेको अनुहारभरि कुटिल मुस्कान फैलिन्छ । सुकीमोरी उसको छिमेकी भए पनि उसको प्रगतिको वाधक थियो । उसको हरेक कार्यहरुको अवरोध कर्ता नै थियो । बैकुण्ठ विज्ञानको पुजारी सुकीमोरी प्रकृतिप्रेमी यी दुबै बीचमा बेलाबेलामा ठक्कर पनि पर्दथ्यो ।
यतिकैमा फेरि सुकीमोरीको बगैंचाबाट एउटा पुतली फुरफुर गर्दै उसको हातमा आएर बस्छ । उसको नरम पखेटा, नरम पुतलीको स्पर्श पाएर एक प्रकारले आनन्द अनुभव गर्छ । धेरै वर्ष पछि बैकुण्ठलाई यसप्रकारको अनुभूति भएको थियो । फेरि उसले सुकीमोरी घरतिर हेर्छ र मनमनै सोच्न वाध्य हुन्छ ―“क म हिडेको विज्ञानको बाटो अभिशाप हो कि वरदान ? के सुकीमोरी सही छ त ? के मानव रक्षाकालागि सुकीमोरीले जति पनि गरिरहेको छ, यो विज्ञान युगमा के उपयुक्त होला त ?” सोच्दासोच्दै ऊ कोठा भित्र छिर्छ ।
कोठाभित्र भित्तामा टाँगिएको बूढाबूढीको तस्बीर जो वास्तवमा उसको बाबुआमा थियो, त्यहाँ हेरिरहन्छ । त्यतिकैमा उसको श्रीमती नेटी कोठाभित्र छिर्छ । बैकुण्ठ तीनै जनालाई पालैपालो हेर्छ । नेटीले लण्च खाने होइन भन्छे । ऊ फेरि सोँचमग्न हुन्छ । उसको सुखी परिवार छ । लगाउने, खुवाउने, हँसाउने कुनै झन्झट नलिई श्रीमती तयार पारेको थियो – रोबटको श्रीमती, सधैं मुस्कुराई रहने, हरेक काम गरिदिने अनि रोबोटको छोराछोरी सिटी मिटी हुर्काउने, बढाउने झन्झट बिनाको सुखी परिवार, नितान्त बेग्लै परिवार बस बाँकी थियो त भावनाका बीउँ रोप्न ।
ऊ भित्र भर्खर उम्रेको मानवताको भावना फेरि पनि उसको महत्वकांक्षाको उर्लिन्दो भेलले बगाएर लग्यो । ऊसँगै भित्र आएको सुकीमोरीको पुतलीलाई कुनै दया बिनानै कुचुक्क पारेर मारिदिन्छ । उसको रोबोट परिवारले के रहेछ भनेर हेरिरहन्छन् । बैकुण्ठ भने छुट्टै रोबोटको संसार बसाल्ने ठूलो महत्वकाँक्षा बोकेर कठोर हुँदै आफ्नो प्रयोगशालातिर लाग्छ ।
सुकीमोरी भने, आफ्नो पुतली हराएकोमो दुःखी भई कसरी प्रकृतिलाई बचाउने भन्दै यताउता दौडधुप गर्दै थिए तर यो त भविष्यको गर्वमा लुकेको छ । रोबोट संसार बन्ने हो की सुकीमोरोको प्राकृतिक सुन्दर प्राकृतिक संसार ।